Muqdisho:Canshuur baan bixiyaa ee mugdi in aan noqdo ma mudanahay?
Dahir Alasow Live: dacwaddii badda Somalia oo laga laabtay
NAXDIN Mohamed Diinooz oo Mucjiso Arkay iyo Argagax,Iyo Cuduro aan la aqoon.
Sh.H.Dahir Aweys oo bilado siiyay Afar Qof, Aamino Muuse, Naciimo qorane,
Sir culus:Kenya oo sheegtay Muranki iBadda Somalia in ay is afgarad ku dhameysteen Dowladda Somalia.
Muranka Badda” Kenya oo sheegtay Arinta badda in aan wadahadal ku dhameysanayno.
Sir Culus.Nin Mareexaan ah oo ka digay qiyaanada Farmaajo,iyo Burburinta M/mul Goboleedyada,
Daawo Somaliland oo Sheegtay in ay ka adkaatay Puntland,Gaadiid dagaalna ka qabsatay,
Mohamed Diinooz Wiilkii Masiixiga ahaa oo soo islaamay,Allahu akbar.
DEG DEG:Faysal C.Waraabe,USC.Waxay Naga Codsatay 1991 kii ilaa G/Kacyo inaan socono.
B/Weyne oo Mar kale wabigii Shabeele ku fatahay,
Daawo Khudbadii ugu xiisaha badneed taariikhda Siyaasiyiinta Somalida
Daawo: Ceebta ku dhacday Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya.
Sir culus: Daawo.Horjoogihii Qaraxyada kooxda Al-shabaab u Farsameyn Jiray.10-05-2018
Deg Deg. Naciima Qorane oo la sii daayey,Afhayeenka Muuse Biixi oo ka hadlay.